Yintoni enokwenziwa yiRosetta 2.0 kunye neMacOS Big Sur kubaphuhlisi | Ndisuka mac
Yintoni enokwenziwa yiRosetta 2.0 kunye neMacOS Big Sur kubaphuhlisi
UManuel Alonso | | Imac enkulu enkulu, Iikhompyuter zeMac
IRosetta yinto endala yabazana nabaphuhlisi. Ukuhamba ukusuka kwi-Power PC ukuya kwiiprosesa ze-Intel, uRosetta wanceda kolo tshintsho. Izicelo ezibhalelwe i-Power PC zathunyelwa ngokuzenzekelayo kwi-Intel esekwe kwi-Macs kubhabho. Abasebenzisi akufuneki balinde abaphuhlisi ukuba bakhuphe iinguqulelo ezintsha ezihambelana ne-Intel yezicelo zabo. NgeRosetta 2 kwiApple Silicon Macs, iApple ikunika ithuba elifanayo. Iya kunceda abaphuhlisi ngokubanika indawo yokuthuthuzela ekufudukeni nasekuvavanyeni izicelo zabo zemveli.
Kude kube abaphuhlisi baphinde bahlangane kwaye bakhuphe izicelo zabo zeApple Silicon Macs, awuyi kuba ngaphandle kwesoftware yakho ebalulekileyo. Nditsho ungaqhuba ii -apps zakho ze-iPhone kunye ne-iPad ngeRosetta 2. UCraig Federighi, usekela-mongameli wobunjineli besoftware, usikhumbuze ukuba i-Apple ibikhe lehla ngaphambili. I-Rosetta 2 kwi-Apple Silicon Macs ibonelela ngokusebenza okukhawulezileyo kwaye iguqulela usetyenziso lwakho ngexesha lofakelo. Oko kuthetha ukuba baya kukhululwa kwangoko kwaye baya kuphendula kakhulu. Isixhobo sesoftware sikwaxhasa ukuguqulelwa kubhabho lwezicelo ze-Just-In-Time (JIT), ezinje ngesikhangeli sewebhu okanye usetyenziso lweJava.
Ngexesha le-WWDC saboniswa ividiyo ebonisa apho u-Andreas Wendker, usekela-mongameli we-Apple kwizixhobo kunye nobunjineli besikhokelo, wabonisa ukuqhuba imodeli ye-Maya 3D kunye nesoftware kumatshini obonakalayo. Yayibukeka intle kakhulu. Ulwelo kwaye lunamandla, igudile kwaye inokubakho okumangalisayo. Ukudlala kwi Isithunzi seTomb Raider sisebenzisa isilawuli somdlalo, esidlalwayo ugqibelele
Ukusuka kwiiyure ezili-01 kunye nemizuzu engama-40, uyabona Eli candelo lithile:
Kunye neRosetta 2, iMacOS Big Sur iya kukuvumela ukonwabele Inkxaso engummangaliso yenyani. Awuyi kuyidinga into efana nokufana, VMWare Fusion okanye VirtualBox. Ubuncinci kwithiyori kuba kwividiyo, uAndreas ngokucacileyo wasebenzisa ukufana ukuqhuba iLinux kwiBig Sur kwiApple Silicon.
Siza kubona ukuba iApple Silicon kunye neRosetta 2 ziguquka njani kunye namandla enokuba nawo. Kodwa, ewe, izinto zijongeka intle kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Yintoni enokwenziwa yiRosetta 2.0 kunye neMacOS Big Sur kubaphuhlisi
I-watchOS 7 iyahambelana njengoluhlu lwe-Apple Watch 3
I-Apple Silicon ayithethi ukuba i-Intel iya kushiywa